के तपाईं ओठको आकार भन्न सक्नुहुन्छ?
चुस्त राख्न समेत, हाम्रो होंठले धेरै कुरा गर्न सक्छ। हामी प्रत्येकको अनुहारका सुविधाहरूमा विभिन्न सुविधाहरूसँग जन्मिएको थियो। चिनियाँ औषधिको नींवबाट प्राप्त ज्ञानले यो व्यक्तिको हड्डी, नाक, वा आँखाको रूपमा व्यक्तिको चरित्र बुझ्न सम्भव बनाउँछ। आज हामी तपाईंलाई बताउनेछौं कि क्या विशेषज्ञहरु होंठ, रहस्यमय र उत्तेजित बारेमा अनुहार पढ्न को लागी भन्छन।
यदि होंठ मोटो हुँदैन र पतली छैन, झन्झट नगर्नु, र कुनै दोष र दोषहरू छैन - हामी मान्न सक्छौं कि व्यक्ति भाग्यशाली थियो। ओठको आदर्श आकार दुर्लभ हो। मुखको रूपरेखाको औसत आकारमा कुनै विशेषता चोट छैन। यसैले, क्यारेक्टर पनि चिन्तामा फरक छ। एक रोमांटिक रिश्तेमा यस्तो व्यक्ति बिना विनाश एक सीधा पाठ्यक्रम बनाए। तिनीहरू पार्टनरसँग सम्बन्ध पत्ता लगाउँदैन र नाटक बजाउँदैनन्। यद्यपि, तपाईं उदारता पनि आफ्नो भावनालाई बोलाउन सक्नुहुन्न।
कृत्रिम रूप देखि माथिल्लो होंठ बढायो
यदि एक महिलाले माथिल्लो होंठ बढेको छ भने, उसले उनीहरूको भाग्य परिवर्तन गर्न सक्दछ। व्यक्तिलाई पढ्ने चिनियाँ विशेषज्ञहरूलाई चेतावनी दिईएको छ कि उपस्थितिमा परिवर्तनहरूले सम्पूर्ण तवरमा भ्रमको सामना गर्दछन्। यदि तपाईं एक चोटि भन्दा माथिल्लो ओठ बढ्नुहुन्छ भने, तपाईं नाटकलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, अधिक स्वार्थी बन्न सक्नुहुन्छ वा भावनात्मक नियन्त्रणबाट बाहिर निस्केर।
यदि माथिल्लो होंठ प्रकृति द्वारा अधिक ढक्कन छ भने, यसको अर्थ हो कि एक व्यक्ति एक रिश्ते मा साथी को आवश्यकताहरु को लागि चिन्ता देखाउन सक्षम छ। तथापि, यस्ता व्यक्तिहरूको आफ्नै आवश्यकताको ख्याल राख्दैन।
इंजेक्शन कम निचोडमा
महिलाहरु जो आफ्नो कम होंठ बढाने को सपना देख्यो र यो गरे, तपाईं आफैलाई लाश को धेरै रुचि हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू सुखद रोमांचको सपना र वास्तवमा जीवनको आनन्द उठाउन चाहन्छन्।
दुवै होंठ प्रकृति संग ढक्कन छ
मुख को यस्तो रूपरेखा आदर्श को नजिक नै हो र दिखाओ कि कसरि भावुक आफ्नो मालिक मा आमा बनना चाहता हो। महिलाहरू जो स्वाभाविक रूपले लुगा लगाउने हड्डी हुन्, अरूको लागि बलियो चिन्ता देखाउन सक्षम हुन्छन्। तिनीहरूसँग साथीहरूको व्यापक सर्कल छ र सजिलै संग सम्पर्क गर्न जान्छन्, र वास्तवमा साझेदारसँग सम्बन्धको पनि सराहना गर्दछ।
पातलो संयुक्त ओठहरू
पहिले हामी एक व्यक्ति हो जसले लोनर हुन सक्छ। यद्यपि, उहाँसँग पूर्णतया उपयुक्त छ। पतली होंठ भएका मानिसहरू वास्तवमा कसैलाई समर्थनको आवश्यकता पर्दैन, तर यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू खराब गठबन्धनहरू सिर्जना गर्छन्। यो मात्र छ कि उनीहरु रमाइलो महसुस गर्छन्।
माथिल्लो होंठले चिसो कपडा पखेटा जस्तो देखिन्छ
होंठको यो रूपले संकेत गर्दछ कि एक व्यक्ति एक राम्रो सञ्चालक हो, चाँडै मन-मनपर्ने मान्छे पाउँछ, रचनात्मकताको धेरै मनपर्छ। तथापि, यी मान्छे प्रायः शब्दहरू पछ्याउँदैन र पहिलो पटक बोल्दैन, र त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूको बीचमा आक्रोशको कारणले सोच्छन्।
होंठ कामदेवको गोल पखेटा जस्तो देखिन्छ
यस्तो ओठको मालिक, नियमको रूपमा, धेरै दयालु आत्मा। यस्ता मानिसहरू अझ दयालु हुन्छन् र अरूको समस्याहरूमा बढी समय बिताउँछन्।
कामदेवको पखेटाको अजीब आकार
वास्तवमा, यस प्रकारको मुख आकारको मालिकसँग पर्याप्त भावुक सीमाहरू नहुन सक्छ। एक ठूलो लम्बी मुखले जिम्मेवारी बोल्छ। यस्ता व्यक्तिहरू प्रायः हेरचाह गर्न प्रयोग गर्दछन्, आफैलाई हेरचाह गर्दैन।
माथिल्लो र निचो होंठमा केन्द्रमा प्राकृतिक सूजन
मुख को केन्द्र मा सूजन स्पष्ट रूप देखि संकेत गर्दछ कि हाम्रो सामने एक व्यक्ति छ जो रोशनी मा रुचि राखछन। यद्यपि, यस्ता व्यक्तिहरू आफैंलाई ध्यान आकर्षित गर्न मन पराउँदैनन्, तिनीहरू दिग्गज रूपमा अकेलापन सहन सक्दैनन्। यस मुख को एक प्रतिनिधि संग सम्बन्ध आफ्नो स्वार्थ को गलती मा, एकदम नाटकीय हुन सक्छ। हड्डीको बीचमा गोलो, मुखको पतली कोनेहरूमा बदल्नु व्यक्तिको हर्षित स्वभाव र भावुक उत्तेजनालाई संकेत गर्दछ।
सानो चट्टान मुख
हामिलाई हामिलाई ठुलो होंठको मालिक हो, तर सानो मुख। एक नियमको रूपमा, उनीहरूले जोससाथ एक पार्टनरबाट आफ्नो व्यक्तिलाई बढि ध्यान दिन्छन्। यद्यपि, उनीहरूले आफूलाई सोच्न सक्नु स्वार्थी जस्तो होइनन्। दोस्रो पछाडिको ध्यान हेरेपछि तिनीहरू तुरुन्तै तिनीहरूको चिन्ता देखाउँछन्। कहिलेकाहिँ यी व्यक्तिले सम्बन्धमा कठिन समय लिन सक्दछन्, किनकि उनीहरूले माथिका प्रेम प्रेमको तीव्र आवश्यकता महसुस गर्छन्। तथापि, यो स्थितिले अनिश्चितकाल जारी गर्दैन। उमेर संग, उनि सुस्त हुन सक्छ।
माथिल्लो होंठ पतली, कम सामान्य
यो व्यक्ति व्यक्तिगत सम्बन्धहरु माथि काम र उपलब्धिहरु को लागी आदी हो। जोडीको सम्बन्ध उनीहरूको लागि अति गाह्रो छ, र कहिलेकाहीँ पनि एक कठिन प्रक्रिया हो। पुरुषहरूमा मुखको एक धेरै सामान्य रूप।
ठूलो मुख र सामान्य मोटो होठ
त्यस्ता व्यक्तिहरू उदार हुन्छन् र सधैं अरूलाई मदत गर्न तयार छन्। तर यदि तपाई ठूलो मुख र पतली होंठ संग एक व्यक्ति देख्नुहुन्छ भने जान्दछ कि त्यो अधिक स्वार्थी छ र आफैले आफैंको बारेमा सोच्न इच्छुक छ।
एक सनकी व्यक्ति हो जसले संसारलाई फरक देख्छ
ध्यान को स्थिरता छ ... मनोविज्ञान मा ध्यान को धारणा। मुख्य गुण र ध्यान को प्रकार
सत्यताप्रतिको सत्यतालाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुहोस् र यो सबैलाई पूरा गर्न सकिन्छ
संचार के हो र कसरी सफल हुन मद्दत गर्दछ
एक सफल व्यक्ति। आधारभूत मनोवैज्ञानिक गुणहरू
आफ्नो हातले प्याचवर्कक्वुइल्ट: क्षेत्रीय विवरण। आफ्नो हातले एक रजाई कसरी सी गर्न?
Agaric उड को उपचार: विषालु च्याउ को चमत्कारी गुण
स्पोर्ट रुचि: देश जो सबै भन्दा राम्रो खेलाडी मा?
सपनामा कपाल काट्न गर्न - यो के हो: हाम्रो लागि के सुत्नेसमय तयार?
कुनै पनि समयमा सौन्दर्य हेरविचार: घर मा गोलो अनुहार कस कसरी
Taemin (Taemin) Shinee देखि: जीवनी, Filmography, फोटो
"Dropshot" योजना (Dropshot): अमेरिकी सोभियत संघ नष्ट गर्न चाहन्थे
सिस्टोलिक र diastolic रक्तचाप
को भित्री मा पर्दे फैशन: एक अवलोकन, मोडेल र रोचक विचार
कसरी स्थापना सुरक्षा प्रणाली लागि बगैचा
को thoracic क्षेत्रमा मेरुदण्ड दुखाइ: कारणहरू